Kuleylka kuleylka - Jiangsu Runau Soo saarista Elektaroonigga Co., Ltd.
Qalabka diode Chip
Xakamaynta Wajiga Thyristor
Xakamaynta Heerka Sare Thyristor
Awoodda Sare ee Saamaynta Xawaaraha Sare ee Thyristor
Si dhakhso ah u beddel Thyristor
Heerka Sare ee Beddelka Thyristor
Thyristor oo ah albaabka laga xiro
Thyristor (TRIAC) oo laba-jiho loo kontoroolay
Diode Soosaaraha Caadiga ah
Jaangooyada Heerka Sare ee Heerkulka Isgoyska Sare
Awoodda Sare ee Difaaca Feejignaanta Bilaashka ah
Soo-kabashada Degdegga ah
Diode Soo-kabashada Jilicsan
Qaboojinta hawada Heatsink SF
Biyaha Qaboojinta Heatsink SS
Qaybaha Ka-reebista Cilad-celinta
Kulammada kale ee Awoodda
Qalabka Aaladda Korontada ee Kuleylka Kuleylka
Kuleylka kuleylka waxaa badanaa loo isticmaalaa dhalaalida birta, ilaalinta kuleylka, jilicsanaanta, alxanka, daminta, xanaaqa, diathermy, nadiifinta biraha dareeraha ah, daaweynta kuleylka, foorarsiga tuubada, iyo koritaanka macdanta. Awoodda soo-gelinta soo-gelinta waxay ka kooban tahay wareegga hagaajinta, wareegga wareegga, wareegga xamuulka, xakamaynta iyo wareegga ilaalinta.
Tikniyoolajiyadda soosaarka korantada dhexdhexaadka ah ee kululaynta induction waa tiknoolajiyad hagaajineysa isdabajoogga korantada hadda jirta (50Hz) si loo jiheeyo awoodda kadibna loo beddelo kuleyl dhexdhexaad ah (400Hz ~ 200kHz) iyada oo loo marayo aaladaha semiconductor-ka awoodda sida thyristor, MOSFET ama IGBT. Tiknoolajiyada ayaa ku jirta qaababka xakamaynta jilicsan, awoodda wax soo saarka ballaaran, iyo waxtarka ka sarreeya qaybta, oo ku habboon in la beddelo soo noqnoqoshada iyadoo loo eegayo shuruudaha kululaynta.
Toosiyaha qalabka korontada keena ee yar iyo kuwa dhexe wuxuu qaataa hagaajinta saddexda waji ee thyristor. Qalabka korontada ku shaqeeya ee awoodda sare leh, 12-pulse hagaajinta thyristor ayaa loo adeegsan doonaa si loo hagaajiyo heerka awoodda korantada iyo in la yareeyo is-waafajinta shabakadda. Qaybta awoodda inverter waxay ka kooban tahay danab sare-xawaare sare leh oo xawaare ku shaqeeya thyristor oo is barbar socda ka dibna taxane ku xiran si loo xaqiijiyo soo saaridda awoodda sare.
Wareegga iyo wareegga wareegga waxaa loo qaybin karaa laba nooc iyadoo loo eegayo guryaha dhismayaasha: 1) nooca isbarbar yaaca isbarbar socda, 2) nooca isdabajooga taxanaha ah.
Nooca is-barbar dhigga ah: -kulk sare oo aad u sarreeya oo biyo-qaboojiye ah (SCR) ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo unug awood-beddelaad nooca hadda jira ah, iyo soo-saarka korantada sare waxaa lagu gartaa is-xakameynta thyristors. Wareegga isdabajooga guud ahaan wuxuu isticmaalaa qaab dhismeed isukeensan oo isbarbar socda, sidoo kale dooro laba-danab ama qaab beddel si aad u kordhiso koronto kuleylka marka loo eego shuruudo kaladuwan, inta badanna lagu dabaqo habka daaweynta kululaynta
Nooca isdabajooga taxanaha: tamar-sare sare-biyo-qaboojiye thyristor (SCR) iyo diode dhakhso ah ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo unug awood koronto ku shaqeeya, iyo soosaarka korantada sare waxaa lagu gartaa isweydaarsiga thyristors. Wareegga is-weydaarsiga wuxuu adeegsadaa qaab-dhismeed isdaba-joog ah, iyo transformer-ka ayaa la qaatay si loo waafajiyo baahida xamuulka. Marka lagu daro faa iidooyinka korantada sare ee Grid-side, kala duwanaanta kaladuwan ee awooda badan, waxtarka kululaynta sareeya iyo heerka guusha bilowga ah, waxay noqotay mid si aad ah loo adeegsado sanadaha hada socda oo badanaa lagu dabaqo habka dhalaalida.
Ka dib hagaajinta nidaamka wax soo saarka, Runau wuxuu soo saaray thyristor si dhakhso ah u beddela shucaaca neerfaha iyo habab kale si uu u sii gaabiyo waqtiga dabka iyo awoodda awoodda oo la horumariyo.
Soosaarka kuleylka dhexdhexaadka ah ee tamarta korontada ku shaqeeya wuxuu qaataa thyristor maaddaama qalabka ugu weyn ee korantada uu daboolay dhammaan meeraha iyadoo lagu shaqeynayo inta ka hooseysa 8kHz. Awoodda wax soo saar waxay u qaybsan tahay 50, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000kW, 5000KW, 10000KW inta jeer ee shaqeyntu waa 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 4kHz, 8kHz. 10 tan, 12 tan, 20 tan oo dhalaalaya birta iyo kuleylka kuleylka, qalabka ugu muhiimsan ee korantada waa soo-celinta korantada oo dhexdhexaad ah. Hadda awoodda ugu badan ee wax soo saar waxay u timaadaa 20000KW oo 40Ton ah. Iyo 'thyristor' waa furaha awoodda beddelka & qayb ka noqoshada in lagu dhaqmo
Dhismaha 3, Maya 20 Wadada Wadada, Aaga Horumarinta, Degmada Guangling, Magaalada Yangzhou
Fakis: + 86-514-87253048